ပါဝါ:3kw + 0.4kw သုံးအဆင့်
စွမ်းရည်:30~ 50kg / h
ငါးအတွက်အစာသည်ကြွယ်ဝသောပရိုတိန်းပါ ၀ င်သည်, ဒါပေမယ့်အစားအစာထဲမှာရေနံစိမ်းပရိုတိန်းငါးများအတွက်အစာကြေဖို့ခဲယဉ်းသည်. ငါးအစာတောင့်စက်မှပြုပြင်ပြီးနောက်အစာသည်အစာကြေလွယ်ရန်လွယ်ကူသည်. စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာတောင့်စက်နှင့်ဆင်တူသည်, ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစားတွင်လည်းသံမဏိကိုအသုံးပြုသည်. ခြောက်သွေ့သောငါးငါးအစာတောင့်စက်သည်သေးငယ်သောအတွက်သင့်လျော်သည်- သို့မဟုတ်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့်ငါးအစာလုပ်ငန်း, ပုစွန်အစာကျွေးခြင်း, ပုစွန်အစာကျွေးသည်, ရေပေါ်ငါးအစာကျွေး, နို့တိုက်ကျွေးနေသောငါးအစာလေးများနှင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာလေးများ.
အဓိကဝင်ရိုး၏ပွတ်အင်အားစု၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် Flat- သေဆုံးအောက်မှာ, အဆိုပါချုံ့ roller လှည့်. roller နှင့် die အကြားမြင့်မားသောအပူချိန်ပစ္စည်းများ၏ဓာတ်ဓာတ်မှည်, နှင့်ပရိုတိန်း congealed ဖြစ်လာသည်. ထို့နောက်ငါးအစာကိုသေတွင်းတွင်းမှထုတ်ယူသည်. ငါးအစာလုံးလေးများသည် extruder မှထုတ်လွှင့်သည်. ထို့အပြင်, ကျနော်တို့ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး၏ထောင့်ကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်အစာကျွေးခြင်း၏အရှည်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်.
3. ဒီငါးအစာတောင့်ကြိတ်စက်သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသည်, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု
4. ဒီသေးငယ်တဲ့ငါးအစားအစာ extruder ၏ဝက်အူလက် enchase အလွိုင်းသံမဏိချွတ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုချမှတ်, ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအာမခံပါသည်.
6. ဒီငါးမှထုတ်လုပ်သောနောက်ဆုံးလုံးလေးများသည်အစာတောင့်စက် dia ကိုကျွေးသည်. 0.9-15mm ဖြစ်ပါတယ်.
ခြောက်သွေ့သောအမျိုးအစား Extruder နှင့်စိုထိုင်းသောအခွံမာစက်တို့၏ကွာခြားချက်များ
1. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာလုံးလေးများသည်ရေနွေးငွေ့စက်ကိုမလိုအပ်ပါ, ထို့ကြောင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်စက်သည်စျေးသက်သာပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်.
2. စိုစွတ်သောအမျိုးအစားငါးအစာတောင့်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစာတောင့်သည်ပိုမိုချောမွေ့ပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခြောက်သွေ့သော extruder နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းပစ္စည်းများသည်အေးစက်။ ရောနှောနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။.
3. ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်စက်၏စွမ်းရည်သည်စိုစွတ်သောငါးအစာတောင့်စက်ထက်နိမ့်သည်, ထို့ကြောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ခြောက်သွေ့သောငါးအစာတောင့်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအသုံးပြုသူသို့မဟုတ်စက်ရုံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးစီးပွားရေးကျသည်.